Hawlgal Xoolaha Lagaga Ururinayo Magaalada Oo Muqdisho Ka Bilawday.
(Hadhwanaagnews) Thursday, November 08, 2018 09:16:16
Ma aqbali karno in Waddooyinka Caasimadda ay iska dhex joogaan Xoolo
Duqa Muqdisho ahna Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan (Eng. Yarisow) ayaa horey u soo saaray wareegto lagu mamnuucayo Xoolaha waddooyinka Caasimadda iska dhex jooga. Iyadoo la sameeyey Xerrooyinkii loogu talagalay oo lagu diyaariyey xannaanada ay xooluhu u baahan yihin.
style="text-align: justify;"> Sidoo kale Duqa Muqdisho ayaa tilmaamay in la diyaariyey xerooyinkii baadi qabadka, halkaas oo lagu xanaanayn doono xoolahan, isla markaana dadkii u hoggaansami waayay wareegtada ay waayi doonaan xoolahooda, laguna wareejin doono Ciidanka Qaranka.
Agaasimaha Waaxda Nadaafadda Gobolka Banaadir Cabdicasiis Goodax Barre ayaa sheegay in qaar kamid ah jidadka ay ka bilaabeen ololahan.